प्रश्न जो एडअन तपाईं अद्यावधिक गर्न चाहनुहुन्छ?
तपाईंले प्राप्त धन्यवाद: 23
2 वर्ष2महिना पहिले #614 by rikoooo
म हाल केही अपडेट गर्न लागिरहेको छु, तपाईँ निकै मलाई पत्ता लगाउन जो तपाईं सबैभन्दा चाहनुहुन्छ मदत हुनेछ, एडअन तपाईं ज्यादातर अद्यावधिक गर्न चाहनुहुन्छ जो थाहा यो सन्देश पोस्ट छु।
र तरिका, तपाईं पनि मलाई एउटा अद्यावधिक संस्करणमा लिङ्क (अर्को वेबसाइट बाट) दिन सक्छ यदि यो शानदार हुनेछ।
यहाहरु सबैलाई धन्यवाद
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: Gh0stRider203, जोडिस्सलाज 1, बबल @ भेडा
2 वर्ष2महिना पहिले #615 by Dariussssss
ठीक सबै को पहिलो, केही त्रुटिहरू ...
A320 मेगा प्याक, दुर्घटनाग्रस्त रहन्छ। यो मेरो मा धेरै अस्थिर छ FSX, किन थाहा छैन।
थोमस रूथ A330 / 340, PFD गोठ र ​​overspeed दुवै देखाउन छैन ... सबै।
इमिरेट्स फ्लीट, धेरै नराम्रा एफपीएस, मेरो क्र्यास गर्दछ FSX...
सम्भव अद्यावधिक ...
खैर, यो तरिका को A330 / 340 TR गरेर, A320 मेगा प्याक संग, अधिक ठीक उत्कृष्ट छ जो ककपिट मर्ज गर्न मर्ज रोचक हुनेछ।
A380, एउटै कुरा हो, PFD गोठ र ​​overspeed दुवै देखाउन छैन।
म अरू केही सम्झना भने, म यसलाई यहाँ राख्नु हुनेछ।
2 वर्ष2महिना पहिले #616 by Gh0stRider203
Dariussssss, सबै एक धेरै सजिलो तय छ !!!
1) आफ्नो Airbus विमान अस्थापना;
2) हटाउने केहि Airbus
3) Boeing यसलाई बदल्नुहोस्
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: denpic
2 वर्ष2महिना पहिले #617 by D115
म भविष्यमा कहिलेकाँही एक गुणस्तर VC संग बोइing 757 हेर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ 757 हटाइएको छ FSX धेरै राम्रो।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: बबल @ भेडा
2 वर्ष2महिना पहिले #619 by Gh0stRider203
D115 ले लेखे: म भविष्यमा कहिले काँही एक गुणवत्ता VC संग बोइ X 757 हेर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ 757 हटाइएको छ FSX धेरै राम्रो।
तपाईं $ खर्च गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, गुणस्तर पंख 757 एकदम सभ्य छ
2 वर्ष2महिना पहिले #649 by julian1245
केही विमानहरूका लागि इन्जिनहरू स्पिन बनाउँदछ किनभने यो केवल अचम्म लाग्दछ जब उनीहरूले अतियथार्थवाद नबनाउँदैनन्
2 वर्ष 1 महिना पहिले #669 by macca22au
धेरै लाई अद्यावधिक गरियो P3Dसम्भव भएसम्म 4, र VC हरू।
तर लेखकले मन पराए पछि एक्क्सएनक्स र बक्सएनमक्स-एक्सएनएक्स v4 लाई अद्यावधिक गर्नुहोस् ......
2 वर्ष 1 महिना पहिले #671 by jakedertree
म Airbus A400M लागि राम्रो कुलपति प्रेम चाहन्छु। साथै, लेखक यो जमीन मा पूर्ण हात को कम गर्न केही निर्देशनहरू प्रदान गर्न सक्षम हुन सक्छ भने, कि भयानक हुन चाहन्छु। गाह्रो टाढा चल्छ, र म (र थाहा छैन) ट्याक्सी बेला इन्जिन बाहिर मधुर एउटा तरिका फेला गर्न सक्नुहुन्छ।
2 वर्ष 1 महिना पहिले #673 by sergiozaki
बोइ X 777 pls को लागी P3D v3 / v4
पूर्ण कार्य VC प्यानल प्लस ...
2 वर्ष 1 महिना पहिले #674 by sergiozaki
Gauges प्यानल, वास्तविक XC 380 को
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.343 सेकेन्ड